10-faa’iidood: Doorka waayeelladu ku leeyihiin nolosha da’yarta | Radio Himilo
Home / Macluumaad / 10-faa’iidood: Doorka waayeelladu ku leeyihiin nolosha da’yarta
Muqdisho (Radiohimilo) – Waayeelladu waxay tusaale nool u yihiin da’yarta soo baxaysa. Da’yartu waxay xikmadda iyo garashadaba kasoo garoocdaan xiska waayeellada. Waayeelladu waa kuwa nagu toosiya dhabaha saxda ah maadaama ay nolosha in-badan nooga xog-ogaalsan yihiin. Marista ay mareen waayaha aynu hadda maraynaa, waxay awoodaan inay nagu hagaan nolol dhurowda.
Hadaba, Radio Himilo, wuxuu idin soo gudbinayaa 10—walxood oo aan waayeelladeenna ka baran karo khibradooda nololeed: